DAAWO:Gaalkacyo oo war lagu farxay uu kasoo kordhay dhinacyada Puntland & Galmudug oo…… – Puntlandtimes
DAAWO:Gaalkacyo oo war lagu farxay uu kasoo kordhay dhinacyada Puntland & Galmudug oo……
GALKACYO(P-TIMES)- Barnaamij ay soo qaban qaabisay wasaaradda Dhalinyaradda iyo Ciyaaraha Puntland oo kaashanaysa guddiga Olompikadda Soomaaliyeed isla markaasna lagu maamuusayey maalinta nabadda kadib markii ciyaar kubadda la wada ciyaarsiiyey dhalinyaro ka kala socda Puntland iyo Galmudug.
Barnaamijkan ayaa looga faa’iidaystay banaan bax nabadeed oo maanta ay sameeyeen shacabka labada dhinac ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ka hadlay masuuliyiin ka kala socotay maamuladda Puntland iyo Galmudug, kuwaas oo dhamaantood ku dheeraaday wada jirka iyo qiimaha ay leedahay nabaddu.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf oo goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in isbadal weyn laga dareemayo haatan amaanka magaalada Gaalkacyo isla markaasna muddo dheer ay ugu dambaysay magaalada dagaalo ka dhaca, hasa yeeshee ay cid walba khal khal galin karto amaanka maadaama ay weli jiraan malayshiyaad hubaysan sida uu sheegay madaxweyne Xaaf.
Waxa uu sheegay in ay ku dadaalayaan adkaynta iyo xasiloonida magaalada Gaalkacyo, isagoona madaxweynuhu ku dheeraaday muhiimada ay leedahay nabadu.
Barnaamijkani oo dhiiri gelin u noqday dhalinyarada labada dhinac isla markaasna u abuuray fursad ay isku dhex galaan ayaa waxaa waxaa iyaguna madasha uu ka socday ka hadlay xubno matalayey guddiga Olompikadda Soomaaliyeed, masuuliyiin ka tirsan wasaaradda Dhalinyaradda iyo Ciyaaraha Puntland iyo dhalinyaro ka kala socotay xaafadaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo dhamaantood amaanay barnaamijkani isla mar ahaan taana sheegay in ay muhiim tahay ka shaqaynta nabada gobolka.
TOOS GAALKACYO:-Barnaamij ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Dhalinyaradda iyo Ciyaaraha Puntland oo kaashanaysa guddiga Olompikadda Soomaaliya ayaa lagu maamusay maalinta nabadda ka dib markii ciyaar kubadda lagu wada ciyaarsiiyay dhalinyaro ka socda Galmudug iyo Puntland.Barnaamijkan ayaa looga faa.iideystay banaan bax nabadeed oo ay maanta sameeyeen shacabka labada dhinac ee Gaalkacyo Galmudug iyo Puntland.
Posted by Dalmar Media Services on Sunday, April 7, 2019
DEG DEG: Ciidamada Booliska Muqdisho & Koofiyad Casta Villa Somalia oo heegan la galiyey iyo Wararkii u dambeeyey
WARBIXIN: Goodax Barre oo ku hor-kufay Shacabka Puntland..